Shiinaha Jet Mill WP Nidaamka – Codso warshad ku taal Agrochemical Field iyo soosaarayaasha | Qiangdi
Mashiinka loo yaqaan 'Fluidized-bed Jet mill' ayaa runtii ah qalab noocan oo kale ah oo walxaha lagu shubo mashiinka ugu weyn iyadoo la adeegsanayo quudinta qiyaasta daawada, waxyaabaha budada ah waxay galeysaa aagga kala soocida, waxay saameyn ku wada yeelanayaan qolka shiidaya ficil xoog xoog leh oo xawaare sare leh. wareegga wareejinta wareegga iyo xuddunta mashiinka qaboojiyaha, budada tayada leh waxaa soo ururiya duufaanta iyo shaandhada boorsada, budada weyn ayaa sii socota shiidi.
Habka hawlgalka iyo tillaabooyinka
Marka hore, Qalabka ceeriin wuxuu ka quudiyaa quudiyaha - wareejinta maaddada illaa 3 m3qas a for premixing, iyo boodh aruuriyaha ururin doonaa boodhka inta lagu guda jiro hawsha quudinta, ka dibna 3m labaad3keydka alaabta wax lagu qaso, ka dib gal mashiinka jetka ee wax lagu shiidayo, cabirka walxaha wax soo saarka ayaa lagu hagaajin karaa adoo hagaajinaya xawaaraha wareega ee kala duwan ee gawaarida kala-sooca,. Mashiibada ka dib, waxyaabaha ayaa loo wareejin doonaa duufaanka iyada oo loo marayo xoogga salka ku haysa ee taageere qabyo ah iyo aruuriyaha boodhka ee dusha sare ee 4m3 fiicni, ka dibna u wareeji 4m labaad3 Mashiinka isku qaska kahor xirmada ama u wareejinta nidaamka WDG.
Nidaamka Xakamaynta PLC
Nidaamku wuxuu qaataa xakamaynta shaashadda taabashada caqliga, hawlgalka fudud iyo xakamaynta saxda ah.
Nidaamka Jet Mill - Codso qorshaha socodka Agrochemical
Nidaamka WP waa isku-dhafnaan kaamil ah tikniyoolajiyada diyaaradda jet, isku-dhafka tikniyoolajiyadda iyo tikniyoolajiyadda xakamaynta caqliga leh taas oo ah badeecad lagu qanco oo loogu talagalay sunta cayayaanka si ay isugu qasto iskuna celiso ， Dhanka kale ， waxay la kulantay codsi deegaan ah oo ahaa in habaas uusan dhicin inta howsha socoto oo dhan.
Waxaan haynaa in ka badan 10 talanti farsamo oo ku hawlan naqshadeynta nidaamka in ka badan 20 sano oo ku saabsan warshadaha budada oo leh khibrad qani ah oo ku saabsan qulqulka, isku darka, qallajinta, pelletizing, baakadaha, iyo gudbinta budada. khadadka wax soo saarka Agrochemical WP / WDG, Waxaan u qaabeyn karnaa shaxanka sida waafaqsan shuruudaha macaamiisha si loo buuxiyo shuruudaha burburka macaamiisha ee agabyo kala duwan.
Shaxda socodka ee Jet Mill WP Line Fluidized-sariirta
Geedi socodka axdi qarameedka waxaa codsanaya Mashiinka jet-dareeraha-dareeraha-shaqeynaya la oolnimada sare, iyo qaybinta qayb walxaha waa isku mid.
Geedi socodka quudinta waxay la socotaa gaadiid hawo cadaadis laga jaray, daal ayaa lagu daraa si looga hortago soo bixida boodhka.
Nidaamka isku darka hore iyo kan ugu dambeeya labadaba wuxuu dabaqaa makiinadaha isku-dhejiska ah ee isku-xidhka laba-geesoodka ah ama isku-darka xargaha isku-xidhka ah kaas oo hubinaya in isku-darka uu ku filan yahay oo isu eg yahay.
Qalabka wax soo saarku 4.Waxaa si toos ah ugu xirmi kara mashiinka wax lagu xiro.
Nidaamka oo dhan waxaa lagu xakameynayaa kontaroolka fog ee PLC. Hawlgal ku habboon iyo dayactir, hawlgalka qalabka otomaatiga ah.
6. Isticmaalka tamarta hoose: waxay badbaadin kartaa 30% ～ 40% tamar marka la barbar dhigo kuwa kale ee hawo-mareenada hawo-mareenka.
7. Waxaa lagu dabaqi karaa in la burburiyo qalabka saamiga isku dhafka sare oo ay ku adag tahay burburka iyo qalabka dareeraha ah.
Faa'iidooyinka nidaamka socodka kala duwan
A. Moodel joogto ah，Lagu dabaqay wax soosaarka ballaaran (QDF-400 wax soo saarka lagu taliyay ee warshadaha cilmiga beeraha)
1. Xiriirka dhuunta ee udhaxeeya boodhka iyo alaabooyinka soo baxa ee dhamaaday ayaa ka hortagaya in siigadu soo daato, ma ogaato inaysan jirin wax wasakh ah boodh iyo wasakh la'aan.
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ayaa leh walaaq dheer iyo naqshadeynta rew taas oo ka ilaalinaysa gabi ahaanba waxyaabaha isku qasmaya inay hoos u degaan ficilkii kacaanka iyo wareegga.
B. Qaab Joogto ah, Oo Loo Adeegsaday Wax Soosaarka Baaxadda Leh (QDF-400 Naqshadeynta Mashiinka Mashiinka Mashiinka Qiyaasta Jiifka ah)
1. Qalabka wax lagu gooyo ee 'Raw' wuxuu leeyahay naqshad isku dhafan, iyo furku waa ku filan yahay ilaa hoose si loo ilaaliyo socodka walxaha si habsami leh.
2.Horizontal muquuninta ribbon fiicni faa'iido: Waa ka sahlan tahay in la sameeyo alaabta qaar ka mid ah kuwaas oo u baahan in lagu daro adjuvant ama kiimikooyin kale ee alaabta la dhammeeyay. Isku darka ayaa aad uga fiican kana saxsan kan fiicni mataanaha isku qabta. dhererka jirka oo ka hooseeya fiicniyaha mataanaha isku dhafan, waa fududahay in la rakibo.
Qaabka joogtada ah ， Loo adeegsaday wax soosaarka tirada badan (QDF-600 Twin design scw mixer)
Hawsha isku-darka ugu horreeya iyo kan ugu dambeeya labadaba waxay adeegsanayaan laba-qaboojiyeyaasha laba-geesoodka ah kaas oo hubiya in isku-darka uu ku filan yahay oo u egyahay. Naqshadaynta qaabdhismeedku waxay ilaalisaa maaddada si habsami leh u qulqulaysa.
D. Qaab fudud oo loo fududeeyay, loona adeegsaday wax soo saar dufcadeed (QDF-400 qaabka quudinta sare)
Faa'iidada: Kalasooca Duufaanta iyo Daad aruuriyaha: Ku dar mitirka gariirka qaybta koorta si looga fogaado isku ururinta maaddada.
E Model fududeeysan, Loogu talagalay wax soo saarka Dufcaddii (QDF-400 Habka quudinta hoose)
Faa'iidada: SEPARATOR: Ku dar hal aag oo kale oo duufaan ah ka dib quudiyaha si uu u kala firdhiyo jihada socodka walxaha ceyriinka ah kana fogaado isku soo ururinta maaddada.
Warshadda Beeraha ee Pakistan, Cayayaanka iyo Dhirta lagu shiideeyo budada, Hal set oo ah khadadka wax soo saarka isdaba jooga ah ee QDF-400 WP, Awood soosaarka 400kg / h, Cabbirka walxaha D90: 45μm
Warshadda Beeraha Burma, Cayayaanka iyo Dhirta ku shiideysa budada, Hal set oo ah khadadka wax soo saarka ee la fududeeyay ee QDF-400 WP, Awood soosaarka 400kg / h, Cabbirka walxaha D90: 30μm
Warshada Beeraha Masar, Cayayaanka iyo Dhirta lagu shiideeyo budada, Hal set oo ah khadadka wax soo saarka isdaba jooga ah ee QDF-400 WP, Awood soosaarka 400kg / h, Cabbirka walxaha D90: 20μm
Tusaalooyinka Qayb Qayb
1. Samee xalka ugu fiican iyo qaabeynta sida ay macaamiisha u yihiin alaabta ceeriin iyo codsi karti.
2. Sameyso ballansi si aad uga rarto warshadda Kunshan Qiangdi una aad warshadda macaamiisha.
3. Bixinta rakibaadda iyo hawlgelinta, tababar goobta loogu talagalay macaamiisha.
4. U siiso buugga Ingiriisiga mashiinnada khadka oo dhan macaamiisha.
5. Dammaanadda qalabka iyo adeegga muddada-iibka kadib.
6. Waxaan ku tijaabin karnaa qalabkaaga si bilaash ah.
U dhaqmee lataliye wanaagsan iyo kaaliyaha macaamiisha si aad ugu suurtageliso inay ku soo laabtaan maalqabeenno hodan ah oo deeqsi ah.
1. U soo bandhig badeecada macmiilka si faahfaahsan, uga jawaab su'aasha uu macmiilku weydiiyey si taxaddar leh;
2. Samee qorshooyin aad ku xulanayso adiga oo raacaya baahiyaha iyo shuruudaha gaarka ah ee isticmaalayaasha qaybaha kala duwan;
3. Taageero tijaabo ah oo tijaabo ah.
4. Eeg Warshaddeena.
1. Hubso in badeecad tayo sare leh oo horay loo sii howl galiyo ka hor bixinta;
2. Ku keen waqtiga loogu talagalay;
3. Bixinta dukumiintiyo buuxa oo ah shuruudaha macaamiisha.
Bixi adeegyo tixgelin si loo yareeyo welwelka macaamiisha.
1. Injineerada loo heli karo mashiinada adeega dibada.
2. Bixi 12 bilood oo damaanad ah markay alaabtu timaaddo.
3. Caawinta macaamiisha si ay ugu diyaar garoobaan qorshaha dhismaha ee ugu horreeya;
4. Ku rakib oo ka bixi qalabka;
5. Tababar hawl wadeennada safka hore;
6. Baadh qalabka;
7. U dadaal si aad u baabi'iso dhibaatooyinka si dhakhso leh;
8. Bixinta taageero farsamo;
9. In lasameeyo xiriir fog iyo mid saaxiibtinimo.
1.Q: Sideen ugu kalsoonaan karaa tayadaada?
1). Dhamaan mashiinka waxaa si tijaabo ah loogu tijaabiyaa aqoon isweydaarsiga QiangDi ka hor rarka.
2). Waxaan ku siin damaanad hal sano ah oo ku saabsan dhammaan qalabka iyo adeegga nolosha-iibka ka dib.
3). Waxaan ku tijaabin karnaa qalabkaaga kahor intaan amarka la dhigin, si loo hubiyo in qalabkeenu ku habboon yahay mashruucaaga.
4). Injineeradayadu waxay aadi doonaan warshaddaada si ay u rakibaan oo u khayaaneeyaan qalabka, dib ugama laaban doonaan illaa ay qalabkani soo saaraan alaab tayo leh.
2. S: Waa maxay doorbidnimadaada marka la barbardhigo alaab-qeybiyeyaasha kale?
1). Injineeradeenna xirfadleyda ah ayaa sameyn kara xalka ugu habboon ee ku saleysan noocyada alaabta ceeriin, awoodda iyo shuruudaha kuwa kale.
2). Qiangdi waxay leedahay injineero badan oo cilmi baaris iyo horumarineed leh in kabadan 20 sano oo khibrad ah, awoodeena R&D waa mid aad u xoogan, waxay horumarin kartaa 5-10 tiknoolajiyad cusub sanad walba.
3). Waxaan leenahay macaamiil aad u tiro badan oo ku takhasusay Agrochemical, Waxyaabo cusub, Daawada daawada adduunka oo dhan,.
3. S: Waa maxay adeegga aan u bixin karno rakibidda mashiinka iyo tijaabada tijaabada? Waa maxay siyaasadeena dammaanad?
Jawaab: Waxaan u dirnaa injineero goobta mashruuca macaamiisha waxaanan ku siineynaa baritaan farsamo goobta ah iyo kormeer inta lagu jiro rakibida mashiinka, howlaha iyo tijaabada. Waxaan bixinaa dammaanad ah 12 bilood ka dib rakibidda ama 18 bilood ka dib dhalmada.
- Waxaan bixinaa adeeg cimri ah alaabadayada mashiinka kadib bixinta, waxaanna la socon doonaa xaaladda mashiinka macaamiisheenna ka dib ku guuleysiga mashiinka guuleysta ee warshadaha macaamiisheena.
4. S: Sidee loo tababaraa shaqaalaheena hawlgalka iyo dayactirka?
Jawaab: Waxaan soo bandhigi doonnaa sawirro farsamo oo faahfaahsan oo wax ku ool ah si aan u barinno hawlgalka iyo dayactirka. Intaa waxaa dheer, injineeradeenna isku-dubbaridka hagaha ayaa shaqaalahaaga ku bari doona goobta.
5. S: Waa maxay shuruudaha shixnad ee aad bixiso?
Jawaab: Waxaan ku bixin karnaa FOB, CIF, CFR iwm iyadoo lagu saleynayo dalabkaaga.
6. S: Waa maxay shuruudaha lacag bixinta ee aad qaadato?
Jawaab: T / T, LC araga iwm
7. Aaway shirkadaadu? Sideen ku booqan karaa halkaas?
Jawaab: Shirkaddayadu waxay ku taal magaalada Kunshan, Gobolka Jiangsu, Shiinaha, waa magaalada ugu dhow Shanghai. Waxaad si toos ah ugu duuli kartaa garoonka diyaaradaha ee Shanghai. Waxaan kaa qaadi karnaa garoonka diyaaradaha ama xarunta tareenka iwm.
Hore: GMP FDA Dufan-sariirta Jet Mill
Xiga: QDF-400 WP Nidaamka Soo-saarista Joogtada ah ee Jet Mill ee 400kg
Warshadaha Batariga Iyo Waxyaabaha Kale Ee Kiimikada Ah ...
QDF-400 WP Nidaamka Soo-saarista Joogtada ah ee Jet ...